Sida loo dejiyo biraawsarka asalka ah iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Imaatinka cusboonaysiinta iOS 14 ee loogu talagalay iPhone, waxaa suurtagal ah in la beddelo arjiga asalka ah si loo furo bogagga internetka iyo iskuxirka emayllada, sheekaysiga iyo shabakadaha bulshada, iyada oo aan daruuri ahayn in loo maro arjiga Safari (had iyo jeer biraawsarka asalka ah ee dhammaan Wax soo saarka Apple). Tani waxay umuuqataa wax fudud oo iska cad, qaasatan hadaan ka nimid dunida Android, laakiin mid kamid ah awoodaha Apple / daciifnimadiisa ugu weyn waxay sabab u ahayd isku xirnaanta xoogan ee codsiyada nidaamka Apple, taas oo aysan macquul aheyn in gabi ahaanba la iska indhatiro. Haddii tan loo arki karo inay tahay faa iidada lagu ilaalinayo nidaamka deegaanka ee Apple si joogto ah, waxay si xaddidan u xaddiday xorriyadda isticmaalaha, oo runti aan furi karin xiriidhada biraawsarka ay doorteen.
Muusiggu wuxuu umuuqdaa inuu kucusboonaaday cusbooneysiintan: aan wada aragno sida loo dejiyo biraawsarka asalka ah ee iPhone, adoo kala dooranaya noocyada kale ee badan ee laga heli karo App Store (laga bilaabo Google Chrome illaa Mozilla Firefox, Opera iyo biraawsarka bilaa magaca ah ee DuckDuckGo).
Cutubyada soo socda ayaan marka hore ku tusi doonaa sida loo hubiyo cusbooneysiinta nidaamka ee iPhone-keena iyo, kadib marka la helo Nidaamka hawlgalka iOS 14, waxaan ku sii wadi karnaa rakibaadda biraawsarkaaga oo waxaan sameyn karnaa isbeddelada lagama maarmaanka u ah si aan uga dhigno biraawsarka asalka ah ee 'iPhone'.
Sida loo cusbooneysiisto iPhone
Kahor intaadan sii wadin, waxaan had iyo jeer kugula talineynaa taas hubi cusbooneysiinta iPhoneGaar ahaan haddii aynaan ogaan wax nooc isbeddel ah ama cusbooneysiin ah maalmihii la soo dhaafay ama bilooyinkii la soo dhaafay. Si aad u cusbooneysiiso iPhone-ka, ku xir shabakad dhakhso leh oo Wi-Fi ah (guriga ama xafiiska), riix arjiga Xeerarka, aan aadno liiska General, waan sii soconaa Cusboonaysiinta software iyo, haddii cusbooneysi jiro, ku rakib adigoo riixaya Soo dejiso oo rakib.
Dhamaadka soo dejinta waxaan dib u bilaabi doonnaa iPhone oo waxaan sugeynaa nidaamka cusub ee hawlgalka inuu bilowdo; haddii aysan jirin wax cusbooneysiin ah oo ku saabsan iOS 14 (waxaa laga yaabaa in sababta oo ah iPhone-gu aad ayuu u duqoobay), isbedelka kuma sameyn karno biraawsarka asalka ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso hagaheena. Sida loo cusbooneysiisto iPhone. Haddii taa bedelkeeda aan dooneyno inaan u beddelno iPhone-keena mid cusub ama mid dib loo qiimeeyay laakiin la jaan qaadaya macruufka 14, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso hageheena IPhone keebaa mudan in maanta la iibsado? Noocyada iyo moodeellada la heli karo.
Sida loo rakibo ama loo cusbooneysiiyo biraawsarka dhinac saddexaad
Ka dib markaan cusbooneysiinno iPhone, waxaan ku dhejineynaa biraawsarkayaga ugu xiisaha badan adoo furaya App Store iyo adeegsiga liiska Buscar, si aad u raadin karto Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Touch, ama biraawsarka DuckDuckGo.
Haddii aan horey u haysano hal ama in ka badan oo daalacashada ah oo lagu rakibay iPhone-keena, ka hor intaanan sii wadin cutubka ugu muhiimsan ee tilmaamahan, hubso in lagu cusbooneysiiyey nooca ugu dambeeya iyadoo la furayo App Store, adigoo riixaya astaanta astaanta noo ah ee midigta sare iyo ugu dambeyntii riixaya Cusboonaysii dhammaan. Ma naqaannaa daalacashada kale ee Safari? Waxaan ku hagaajin karnaa isla markiiba annaga oo u akhrinna hageheena Daaqadaha ugu fiican loogu talagalay iPhone iyo iPad beddelka Safari.
Sida loo dejiyo biraawsarka cusub
Ka dib markaan soo dejino ama cusbooneysiino biraawsarka dhinac saddexaad ee iPhone-ka, waxaan u qaabeyn karnaa inuu noqdo biraawsarka aasaasiga ah ee xiriiriye kasta ama bog kasta oo aan furi doonno adoo nagu geynaya dalabka. Xeerarka, rogrogmaya ilaa aad kaheleyso magaca biraawsarka oo, markii la furo, ku riix menu-ka Abka biraawsarka asalka ah oo aan ka dooranno liiskan.
Ku riixitaanka magaca biraawsarka ayaa soo bandhigi doona calaamadda jeegga, calaamad muujinaysa in nidaamku aqbalay isbeddelka. Ma aragno biraawsarkayaga liiska ama sheyga uma muuqdo Abka biraawsarka asalka ah? Waxaan hubineynaa in biraawsarka iyo nidaamka qalliinka ay cusbooneysiinayaan (sida lagu arkay cutubyadii hore), haddii kale suurtagal ma noqoneyso in la doorto.
Isbeddelkan yar, Apple wuxuu isku dayayaa inuu ka soo baxo sanduuqa oo uu ku soo dhowaado dabacsanaanta iyo wax ku oolnimada lagu arko casriga casriga ah ee Android. Xaqiiqdii, macruufka 14 kuma xirno adeegsiga Safari xiriir kasta oo lagu furo emayllada ama sheekaysiga, kaas oo noo oggolaanaya inaan adeegsanno biraawsarkayaga aan ugu jecelnahay mar kasta oo loo baahdo. Tan waxaa loo arki karaa "kacaan badh" ama halkii "isbeddel": Apple waxay ogaatay in adeegsadayaasheedu aysan had iyo jeer ku xirnayn barnaamijyada ay soo saaraan iyo in, xaaladaha badankood, ay u isticmaalaan Safari kaliya sababtoo ah nidaamka ma. waxaad u isticmaali kartaa daalacayaasha kale asal ahaan (taas oo hadda macquul ku ah iOS 14). Ka sokow biraawsarka, beddelka dalabka asalka ah ayaa sidoo kale loo heli karaa barnaamijyada kale ee nidaamka sida Boostada: sidaa darteed, waxaan la furi karnaa emaylkeena ama lifaaqyada aan la leenahay macaamiisha kale annaga oo aan marin nidaamka codsiyada ku xiran deegaanka Apple ( dhakhso badan laakiin had iyo jeer maaha kuwa leh shaqooyin badan).
Haddii aan dooneyno inaan ku beddelno barnaamijyada caadiga ah ee casriga casriga ah ee 'Android', waxaan kugula talineynaa inaad aqriso hageheena Sida loo beddelo barnaamijyada caadiga ah ee Android. Waxaan badanaa isticmaalnaa kumbuyuutarka Windows 10 laakiin ma naqaano sida loo beddelo barnaamijyada asalka ah? Xaaladdan oo kale waxaan ka caawin karnaa tillaabooyinka lagu tilmaamay hageheena. Sida loo beddelo barnaamijyada caadiga ah ee Windows 10.
Miyaynaan rabin inaan ka tagno Safari buluugga mise waxaan weli u tixgelinnaa inuu yahay biraawsarka ugu fiican ee iPhone? Xaaladdan oo kale waxaan sii wadi karnaa akhriska maqaalkeenna Xeeladaha Safari iyo sifooyinka biraawsarka biraawsarka iyo iPhone ka fiican, sidaa darteed waxaad isla markiiba baran kartaa khiyaamo kala duwan oo waxtar leh iyo shaqooyin qarsoon si aad u sii wadato adeegsiga biraawsarkan biraawsarka ah.